Mofon’aina – TALATA 20 FEBROARY 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 20 FEBROARY 2018
21 febroary 2018
14 Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy indray Izy ka nanao taminy hoe: Mihainoa Ahy ianareo rehetra, ka mahafantara.15 Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin’ ny olona no mahaloto azy; fa izay mivoaka avy ao anatin’ ny olona no mahaloto azy.17 Ary rehefa niala teo amin’ ny vahoaka Izy ka niditra tao an-trano, dia nanontany Azy ny mpianany ny amin’ izany fanoharana izany.18 Ary hoy Izy taminy: Hay! ianareo koa aza mba tsy mahafantatra! Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan’ ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy,19 satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin’ ny fivoahana; izany no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra.20 Ary hoy Izy: Izay mivoaka avy ao amin’ ny olona, dia izany no mahaloto azy.21 Fa avy ao anatin’ ny olona dia avy ao am-pony, no ivoahan’ ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan-olona, ny fakam-badin’ olona,22 ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana:23 izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ ny olona ka mahaloto azy.
MARKA 7 :14-23
NY MAHALOTO NY OLONA
1-Tsy ny sakafo
Nanome tsiny an’i Jesoa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna satria tsy mba nanaraka ny fampianarana voatolotry ny razana izy ireo. Avy hatrany dia nihinan-kanina tamin’ny tànana tsy voasasa. Nampianatra noho izany i Jesoa Kristy fa ny sakafo miditra avy any ivelany miditra ao an-kibo, tsy mahakasika ny toetry ny fo. Araka izany, tsy ny sakafo no mampaloto. Tsy mampisaraka ny olona amin’Andriamanitra ny fanajana ny fampianarana voatolotry ny razana. Ny fampianaran’ Andriamanitra no tokony kajiana sy tandremana fatratra.
2-Ny toetry ny fo
Ahariharin’i Jesoa Kristy eto fa ny mivoaka avy ao anaty no tena mampahaloto ny olona .Ny toetry ny fon’ny olona tokoa mantsy dia miseho hitan’ny rehetra . Ny fo anaty no maneho ny maha- olona ny olona . Avy ao am-po no miainga ny fihetsehampo , ny faniriana .Koa rehefa tsy madio ny fo dia mitarika ny olona ho amin’ny faharatsiana , fandikana ny sitrapon’ Andriamanitra sy ny fitondrantena tsy mendrika izany . Rehefa madio ny fon’ny olona mitandrina sy mankato ny Tenin’ Andriamanitra dia resy ny fahotana. Jesoa Kristy dia efa nilaza fa sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’ Andriamanitra.
Inona no toe-javatra mahaloto ny olona ? Misy mahakasika ny fiainanao ve ? Inona no tokony ataonao ?
Mofon'aina - TALATA 20…
Safidio Amosa (4) Apokalispsy (11) Asan’ny Apostoly (18) Daniela (6) Deotoronomia (11) Efesiana (7) Eksodosy (14) Estera (1) Ezekiela (1) Ezra (1) Filipiana (3) Fitomaniana (2) Galatiana (6) Genesisy (6) Hebreo (5) Hosea (2) I Jaona (6) I Korintiana (7) I Mpanjaka (2) I Petera (8) I Samoela (5) I Tantara (1) I Tesaloniana (3) I Timoty (3) II Korintiana (10) II Mpanjaka (5) II Petera (4) II Samoela (2) II Tantara (3) II Tesaloniana (3) II Timoty (3) Isaia (14) Jakoba (3) Jaona (28) Jeremia (11) Joba (5) Joda (1) Joela (1) Josoa (7) Kolosiana (3) Levitikosy (3) Lioka (24) Marka (18) Matio (29) Mpitoriteny (2) Mpitsara (2) Nehemia (1) Nomery (3) Ohabolana (6) Romana (10) Salamo (19) Titosy (5) Zakaria (1)
septambra 2018 (17)